Juventus oo beddelka Paulo Dybala ka dhex aragta Kooxda Chelsea – Gool FM
Juventus oo beddelka Paulo Dybala ka dhex aragta Kooxda Chelsea
Haaruun May 4, 2022
(Turin) 04 Maajo 2022. Kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa la soo warinayaa inay beddeka Paulo Dybala ka dhex aragto naadiga reer England ee Chelsea.
Warsidaha Tuttosport ayaa warinaya in Juventus ay bartilmaameed ka dhiganayso Weeraryahanka Kooxda Chelsea ee Christian Pulisic.
Xiddiga xulka qaranka Mareykanka ayaa shaki la galiyey mustaqbalkiisa Chelsea kaddib hadallo ka soo yeeray Aabihiis oo ku aaddanaa in uusan si joogta ah ugu soo bilaaban safka hore ee garoonka Stamford Bridge.
Juventus ayaa Pulisic u aragta beddelka ugu macquulsan ee Paulo Dybala maadaama uu qandaraaskiisu dhammaanayo, laakiin xiddiga kooxda Sassuolo ee Giacomo Raspadori ayaa sidoo kale ku jira xiddiga ay suuqa ka doonayaan.
Kooxda Manchester United oo ku sii dhowaanaysa saxiixa Darwin Nunez… (Halkee ayay haatan wax marayaan?)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Madrid iyo Man City ee tartanka Champions League oo la shaaciyey